Salesforce Marketing Cloud Preferensi Center: AMPScript sy Cloud Page ohatra | Martech Zone
Salesforce Marketing Cloud Preferensi Center: ohatra AMPScript sy Cloud Page
Alarobia, Febroary 3, 2021 Zoma, Martsa 5, 2021 Douglas Karr
Tantara marina… tena nihatsara ny asako folo taona lasa izay raha nanomboka niasa ho mpanolotsaina fampidirana ho an'ny ExactTarget (Salesforce Marketing Cloud) aho. Ny asako dia nitondra ahy manerana an'izao tontolo izao nanampy orinasa tamin'ny fampiroboroboana fidirana lalina amin'ny sehatra ary nanangana fahalalana be dia be momba ny sehatra an-tserasera aho ka nasandratako ho Product Manager.
Ny fanambin'ny Product Manager ho an'ny fikambanana iray izay fananan'ny mpamorona teo aloha dia nahatonga ahy hifindra. Fikambanana tena tsara izy io, fa tsy tena marina owned ny vokatra. Noho izany, na dia nitodika tany amiko aza ireo mpiara-miasa amiko amin'ny fanohanana, varotra ary varotra vokatra hanova tena fiovana… ny zava-misy dia matetika ny ekipa fampandrosoana no nametraka vahaolana hafa ary ho hitako andro maromaro alohan'ny famoahana.
Ny iray amin'ireo tetikasako farany dia miasa amin'ny sehatra scripting anatiny ahafahan'ny mpanjifanay manampy script amin'ny mailak'izy ireo. Niara-niasa tamin'ny Product Manager iray hafa aho ary nanao fikarohana an-taoniny maro… nanapa-kevitra ny hampivoatra fomba JQuery miaraka amin'ireo asanay manokana, fa ao anatin'izany ny fahaizana mandalo sy mihinana arrays, mampiasa JSON, sns. vahaolana… mandra-pahatongan'ny fandrosoana. Tany am-piandohan'ny tsingerin'ny vokatra dia nesorina ny tranombokiko ary nosoloin'ny mpandrindra zokiny AMPscript.
Taona maro taty aoriana, ny Mpiara-miasa Salesforce orinasa iray mpiara-miasa amiko izao dia manao sarotra, fampidirana orinasa, ary hitako fa tototry ny AMPscript isan'andro aho - na ny fanatsarana ny lojika amin'ny atiny mailaka na ny famoahana ireo pejy Cloud. Mazava ho azy, ny fahasosoran'ny fiasana isan'andro isan'andro miaraka amin'ny AMPscript dia manome antoka ahy fa ny fanapahan-kevitra diso dia noraisina tamin'ny androny… mety ho kanto kokoa ny vahaolana. Mahatsiaro ho toy ny niverina nanao fandaharana TRS-80 amin'ny BASIC aho.
Ny mpamaky izay ampiasainao amin'ny Cloud Pages dia tsy mamela heloka. Tsy mahasarika olana tsotra toy ny fanambaràna miovaova na hadisoan'ny syntax amin'ny kaody anao. Raha ny marina dia afaka mamoaka pejy iray ianao izay hiteraka hadisoana 500 mpizara fotsiny. Misy ihany koa ny saha roa ho an'ny pejinao… aza manontany ahy ny antony.
Pro-Soso-kevitra: Raha tsy mamerina angona santionany na oviana na oviana ny Cloud Pages rehefa hanonta ianao ary toa mandeha mandrakizay io… tsy ho diso ianao. Raha mamoaka izany ianao, dia mety hamafa ny pejy Cloud daholo ianao ary hanomboka indray. Ny vinavinako dia ny fotodrafitrasa natsangany teo amboniny tsy ampy saina hahitana fiovan'ny kaody ary manohy fikirakirana ny kaody cache.
Ankoatr'izay, ho faly ianao mahafantatra ny maro amin'ireo santionany kaody voarakitra an-tsoratra manana ny hadisoan'izy ireo manokana. Yay! Traikefa mahatsiravina… saingy mbola azonao atao sy tokony hampiasa azy io satria manome fahafaha-manao mahavariana.
Pejy fandraisana: Misy pejy Cloud vaovao Experience… Aiza no toa nandoko fotsiny ilay pejy ary tsy manome fampahalalana fanampiny. Tena tiako ilay kinova taloha kokoa ho an'ny fizotran'ny famoahana dingana maro.
Raha ny orinasako Highbridge manangana vahaolana sarotra, Ajax ahafahana mampiditra rafitra marobe sy mampiditra fanitarana data miaraka amin'ny AMPscript, SSJS, Cloud Pages, ary mailaka… Te hizara ohatra tsotra iray momba ny fomba hanombohana amin'ny fampiasana tsotra fotsiny ny AMPscript aho hanontanianao ny ohatra Salesforce anao data ambadika. Amin'ity tranga ity, saha boolean tsotra izay mitazona saina tsy manoratra. Azonao atao, mazava ho azy, ny manitatra ity kaody ity raha te hanana pejy fidiana iray manontolo na ivon-tohan-kevitra azonao ampiasaina.
Miteraha rohy misy pejy misy rahona miaraka amin'ireo angona mpizara
Raha mijery ny antsipirian'ny pejin'ny Cloud-nao ianao dia afaka mahazo ny ID pejy tokana ho an'ilay pejy azonao ampidirina amin'ny mailakao.
Ireto ny syntax:
AMPscript ho an'ny Data Salesforce amin'ny alàlan'ny pejy Cloud amin'ny alàlan'ny fanitarana data
Ny dingana voalohany dia ny fananganana ny AMPscript anao hanambarana ireo miovaova ary haka ny angona avy amin'ny Salesforce hampiasaina amin'ny pejinao. Amin'ity ohatra ity dia nomena anarana ny saha Boolean an'ny Salesforce izay mitazona ny marina na diso OptedOut:
Ankehitriny ianao dia afaka manangana ny HTML sy ny endrika mandamina ny fangatahana:
Izay ilay izy… atambatra miaraka ary manana pejy fanararaotana izay havaozina amin'ny rakitsoratry ny mpamandrika ianao ary mandefa fangatahana hanavao ny saha boolean (marina / diso) ao amin'ny Salesforce. Ankehitriny ianao dia afaka manangana fanontam-pirinty manokana manodidina an'io saha io mba hahazoana antoka foana fa tsy voaefa mailaka ny fifandraisana voailika
Ahoana ny fanatsarana ny pejy tianao na ny ivotoerana momba anao
Mazava ho azy, ity dia teaser fotsiny ny zavatra azo atao miaraka amin'ny pejy preferences. Fanatsarana azonao eritreretina:
Ampidino avy amin'ny fanitarana data hafa ny tena izy mba hahafahan'ny ekipa marketing anao manavao ny atin'ny pejy isaky ny maniry izy ireo nefa tsy mikasika ny kaody.
Mipetraha fanitarana lisitra famoahana lisitra ary atsofohy amin'ny alàlan'ny publication mba hanolorana opt-in na opt-out amin'ny safidy ankoatran'ny master unsubscribe.
Mipetraha fanitarana anton-kevitra iray mba hisamborana ny antony mahatonga ny mpamandrika tsy hisoratra anarana.
Fidio ny mombamomba ny mombamomba anao avy ao amin'ny firaketana Salesforce hanomezana mombamomba ny mombamomba anao.
Alaharo miaraka amin'i Ajax ny pejy mba hahafahanao mameno azy io.
Manolora fomba fisoratana anarana hahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny ivon'ny mombamomba azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Loharano fanampiny ho an'ny AMPscript
Raha mitady fanampiana fanampiny ianao hianarana sy hampiasana ny AMPscript, ireto misy loharano tena tsara:
Torolàlana AMPscripte - karakarain'ny mpiasan'ny Salesforce sasany, ity dia tahiry feno tsara momba ny syntax AMPscript, na dia maivana aza ireo ohatra. Raha matanjaka kokoa io dia mety ho mendrika ny fampiasam-bola.
Trailhead AMPscript - Salesforce's Trailhead dia loharanom-pahalalana maimaim-poana ary afaka mitety anao amin'ny làlan'ny fiteny amin'ny alàlan'ny AMPscript, SSJS, ary ny fomba ifandraisan'izy roa tonta.
Stack Exchange ho an'ny Salesforce - vondrom-piarahamonina an-tserasera tsara ho an'ny fangatahana fanampiana miaraka amina santionany kaody AMPscript.
Misy fotoana iray an-tsitrapo amin'ny fampifangaroana ireo pejinao Cloud miaraka amin'ny Salesforce hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa ambony. Ary raha sahirana ny orinasanao dia afaka mifandray aminay foana ianao hanampy!
Laharana fandraisana na rohy Highbridge
Tags: ampscriptpejy rahonaiifRetrieveSalesforceObjectsUpdateSingleSalesforceObject
Maody maizina ho an'ny mailaka: Inona izany? Iza amin'ireo mpanjifa no manohana an'io? Kaody inona no ilaina?